Nandeha niasa ivelan'ny fiasana aho androany dia tena be embouteillages be mihintsy, nanana fotoana tamin'ilay Madama partenaire aho tamin'ny 9h30. Efa niala 1h30 mialoha za fa tena tsetsina loatra ny lalana. Teo aho nivavaka hoe Jesosy o, tena mila ny famonjenao indray izaho fa tena grave be raha tara eto fa mety hiakatra ambony be any amin'ny direction ity, ka tena hanala baraka eto. Minitra vitsy taty aoriana nahazo sms za tamin'ilay madama hoe tara izy. Tena lehibe Andriamantra, lasa za ndray no tonga aloha.
Fa hoy ny Soratra Masina: Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy (Isa. 28:16) Romana 10-11
Inona no tiako hantongavana?
Raha izaho izay be fahotana sy be fahalemena ity no narovan'Andriamanitra tamin'ny resaka henatra, dia ny vahoaka Malagasy be dia be ireo ve dia ho avelany ho very sy anaty jaly mandrakizay?
Hoy Andriamanitra mantsy an'i Jona tao Niniva:... Hianao malahelo ny tanantanamanga izay tsy nisasaranao na nampanirinao, dia ilay naniry indray alina monja ary maty indray alina koa; ka moa Izaho tsy mba halahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe va. izay misy olona tsy omby roa alina sy iray hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa? Jona 4:10-11
Firy ny isan'ny Malagasy raha hoarina amin'ny olona tao Niniva? Efa Miasa Andriamanitra fa mila mino isika hatramin'ny farany na dia mbola tsy mahita na inona na inona aza, na dia ohatran’ny mifanohitra amin'izany aza ny tranga ankehitriny.
Mampahery antsika Kristiana rehetra aho mba tsy ho kivy, fa hijoro amin'ny finoana. Manana Andriamanitra velona isika, ka samia miaritra sy maharitra
Matoky aho fa Andriamanitra, Izay nanomboka asa tsara tao aminareo (Madagasikara) , dia hanohy izany hatrany ka hahatanteraka azy amin'ny andro hiavian'i Kristy Jesosy.
Filipianina 1:6 DIEM